Dowladda Somaliya oo sheegtay in Sucuudigu qaaday xayiraaddii saarneyd xoolaha Soomaaliya. – XAMAR POST
Dowladda Somaliya oo sheegtay in Sucuudigu qaaday xayiraaddii saarneyd xoolaha Soomaaliya.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ku guuleysatay in dowladda Sucuudiga ay qaaddo xayiraaddii saarneyd Xoolaha Soomaaliya ee loo dhoofinayo dalkaas.
Qoraalka wasaaradda Xannaanada xoolaha Soomaaliya ka soo baxay ee la xiriira arrintan ayaa u qornaa;
“Xiriiro baddan oo aan la sameeynay wasaradda dhigeena ah ee dalka Sacuudiga kadib wafdi uu hogaaminayo Ra’iisul wasaare ku-Xigeenka Xukuumada oo uu ka mid ahaa Wasiirka Wasaardda X. Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa uu safar ku tagay Dalka Sacuudiga iyadoo si qoto dheer looga wada hadlay in xoolaha Soomaaliyeed laga qaado xayiraadaha soo noq noqtay waxaana la isku afgartay in si wada jir ah aan uga wada shaqeeyno si aaney xayiraadahaasi ay dib u soo laabanin.
Anigoo la qaybsanaya farxaddan shacabka Soomaaliyeed iyo inta daneeysa xoolaha Soomaaliyeed waxaan idinka codsaneeyna in aad nagala shaqeeysaan horumarinta caafimaadka iyo fulinta halbeegyada caalamiga ah (International Standards) ee la xiriira dhoofka Xoolaha Soomaaliya iyadoo danta gaar aan ka hormarineeyno danta guud ee Umadda Soomaaliyeed oo ay noloshoodu ku tiirsantahay xoolaha.”
Dhinaca kale Somaliland ayaa dhawaan diidday go’aan ka soo baxay Dowladda Sucuudiga oo ahaa in warqadda caafimaadka Xoolaha Soomaaliya ay bixineyso dowladda Federaalka ah halka markii hore ay bixin jirtay Somaliland maaddaama xoolaha ugu badan laga dhoofiyo Dekadda Berbera.